यो पाठ बारेमा छैन विवाह संगठित कसरी, र कसरी यो महान् घटना मा उनको प्रमुख र गौण सहभागीहरू लागि तयारी गर्न। सबै प्रशिक्षण सर्वश्रेष्ठ व्यवसायीक वा बढी सजग र जिम्मेवार परिवार र साथीहरूलाई बाँकी छ। अन्यथा, पर्व को संगठन तिनीहरूले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन देखि कुनै पनि खुशी प्राप्त छैन भनेर नवविवाहितहरूका यति थकित छ।
कसरी विवाह दुलही लागि तयार
दुलही लागि मुख्य कुरा हो - राम्रो हेर्न! तसर्थ, माथि हरेक विवरण नियन्त्रणमा दिन र तिनीहरूलाई कस गर्न एक जरुरी आवश्यकता। त्यसैले हामी क्रममा राख्नु:
- दाँत विरंजन, आवश्यक भएमा व्यवहार,;
- छाला: मइस्चराइजिंग मास्क को एक मार्ग पछ्याउने;
- बाल: सैलुन गरिन गर्न कम्तिमा5दिन पूर्व को समारोह गर्न (त्यसैले तिनीहरू झूठ हुनेछ थप स्वाभाविक) र विशेष कस्मेटिक प्रक्रियाहरु को माध्यम द्वारा कपाल संरचना पुनर्स्थापना आवश्यक;
- आकार: एक आहार छोटो अवधि (3-4 दिन) मा बस्न - र पोशाक बस्न राम्रो हुनेछ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा यो (अन्यथा यो महान हुनेछ) ज्यादा गर्न छैन।
र पाठ्यक्रम, को outfit चयन - पोशाक, जूता, आभूषण, आदि ...
विवाह लागि तयारी: तपाईं दुलहा गर्न के आवश्यक छ
दूल्हा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा को लागि - समय विवाह आउन र समारोह मा सभ्य हेर्न। सबै मानिसहरूलाई सल्लाह: कम, तयारी को चरण मा भविष्यमा पत्नी संग तर्क यसको सबै एक छुट्टी, एक दिन को पहिलो यो पृथ्वीमा सबैभन्दा सुन्दर केटी महसुस गर्नेछन् जब।
कसरी विवाह साक्षी लागि तयार
साक्षीको एक स्नातक पार्टी व्यवस्थित गर्न छ - यो देखिन्छ रूपमा सजिलो छैन। तपाईं घटना दुलहा र आफ्नो मित्र आनन्द, तर दुलही नकारात्मक मनोवृत्ति कारण छैन भनेर पक्का गर्न आवश्यक छ। किनभने त्यो अझै पनि सबै थाह! यो विवाहको दिन साक्षीको रजस्ट्रार गर्न ढुवानी छल्ले, रक्सी र चश्मा जस्ता कुराहरू लागि जिम्मेवार छ। तयारी मा, त्यो निःशुल्क परिवहन को संगठन र सजावट लिन सक्छ।
साक्षीको - सबै भन्दा राम्रो दुलही को मित्र। प्रशिक्षण समयमा यो र सबै उनको सहायता भविष्यमा spouses को नसाहरू रक्षा र bachelorette पार्टी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। त्यसैले, साक्षीको निम्न गर्नुपर्छ:
; - भोज मा आवश्यक हुन सक्छ कि सबै कुरा .. - तयार एक ब्यूटिशियन, तौलिया, पिन, सुई र मुद्दा, आदि
- समय-समयमा फोटो समीक्षा (तपाईं एक पेशेवर फोटोग्राफर छैनन्, विशेष गरी यदि);
- मास्टर (समारोह को मास्टर) मदत गर्न;
- दुलही केही चिन्तित थियो कि विवरण को हजारौं जाँच गर्न सम्झना।
कसरी विवाह अतिथि लागि तयार
अतिथिहरूको तिनीहरूले मुख्य culprits उत्सव छैनन् भनेर सम्झनुपर्छ। बालिका सौन्दर्य र शान मा दुलही राम्रो होना प्रयास हुँदैन - यो तपाईं हरेक दिन आउन छ होइन, केवल लम्बाइ, वस्त्र को रंग र शैली को विकल्प संग सावधान रहन - उज्ज्वल रंग तल्ला मा कुनै कपडे हुँदैन! मानिसहरू मर्यादा संग व्यवहार। र, को पाठ्यक्रम, एक उपहार तयार। परंपरागत आवश्यक र उपयोगी कुरा दिन - घरेलू उपकरण, भान्सा बर्तन, वस्त्र, साथै, यो सुन्दर प्याकेज र हस्ताक्षर गर्नुपर्छ।
त्यसैले, यहाँ सबै सहभागीहरूलाई विवाह लागि तयारी गर्न कसरी आधारभूत सुझावहरू छन्। र यो शुभ दिन, सबै खुसी हुन र रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने भूल छैन!
प्रणय दिवस को लागि आफ्नो हातले एक पोस्टकार्ड बनाउन
एक बहाना घूम्छ बल मजा कसरी पकड
पाँच पागल दीर्घ mope आफैलाई छुटकारा तरिकाहरू
समरकान्द आकर्षण: विवरण, फोटो र समीक्षा
एक पाँच मिनेट सम्झौता - एउटा इमेल सिर्जना
जिन्स रूपमा पुरुषहरु छोटकरीमा आफ्नो बनाउनुहोस्?